मोफसलमै पहिलोपटक नोबेलमा ईपी ल्याब | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार मोफसलमै पहिलोपटक नोबेलमा ईपी ल्याब
on: June 15, 2018 प्रदेश समाचार
मोफसलमै पहिलोपटक नोबेलमा ईपी ल्याब
विराटनगर (अस) । मुटुको चाल गडबडीसम्बन्धी उपचारका लागि विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालले मोफसलमै पहिलोपटक ईपी ल्याब शुरू गरेको छ । राजधानी बाहिरको पहिलो अर्थात् नेपालको दोस्रो ल्याबको रूपमा नोबेलले ईपी ल्याब सञ्चालन गरी मुटुको चालसम्बन्धी रोगको दिगो उपचार थालेको हो ।
मुटुको चाल अत्यधिक बढ्ने समस्या भएका बिरामीले ईपी ल्याब अभाव हुँदा वर्षौंदेखि नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसअघि राजधानीको गङ्गालाल अस्पतालमा मात्र यो ल्याब रहेकाले उपचारका लागि महीनौं कुर्नुपर्ने समस्या थियो । तर, अब नोबेलले ईपी ल्याब सञ्चालन गरेपछि मुटुको चाल बढेर समस्या झेल्दै आएका बिरामीले सहज उपचार पाउने नोबेल अस्पतालका डा. राजेश नेपाल बताउँछन् ।
नोबेलले दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी अमेरिकी मेशिन ल्याएर ईपी ल्याब शुरू गरेपछि बिरामीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएकाले आफूहरू उत्साहित बनेको नोबेल अस्पतालका सञ्चालक डा. सुनील शर्माको भनाइ छ । नोबेलमा पहिलो दिन नै ६ जनाले ईपी ल्याबबाट उपचार गराएका छन् । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषमार्फत पनि नोबेलले उपचार गर्दै आएकाले विपन्न नागरिकले ईपी ल्याबबाट निःशुल्क उपचार पाएका छन् ।